Latest Myanmar News - Page 132 of 142 - News & Media
ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကျပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်စေမည့် ဆေးနည်း ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်၊ ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးဆိုး၊ ရင်ကျပ်ကျပ် ပဲးပင်ပေါက် ရှိရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ညအိပ်ယာဝင် မနက် အိပ်ယာထ နှစ်ကြိမ် ပဲပင်ပေါက် ရေနွေးစိမ်၍ သောက်ပါ။ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်၊ အဆင်ပြေစေမယ်ဗျာ။ လွယ်လွယ်လေးပါနော်။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ပဲပင်ပေါက်ကို ခွက်တစ်လုံးထဲ ထည့် ရေနွေးထည့်ပြီး သောက်ယုံပါပဲနော်။ မင်္ဂလာရှိသောနေ့ ဖြစ်ပါစေ။ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းကြပါစေ။ အစဉ်လေးစားလျှက်။ ကိုကြီးစိုး Unicode ခြောငျးဆိုး၊ ရငျကပျြ၊ သလိပျကပျသူမြား ခကျြခငျြးသောကျ ခကျြခငျြးပြောကျစမေညျ့ ဆေးနညျး ခြောငျးဆိုး၊ ရငျကွပျ၊ သလိပျကပျ၊ ဘာကွောငျ့ ခြောငျးဆိုးဆိုး၊ ရငျကပျြကပျြ ပဲးပငျပေါကျ ရှိရငျ အဆငျပွတေယျဗြ။ … Read more
ဧရာဝတီတိုင်းတွင်လူငါးဦးထက်ပိုပီးခရီးမသွားရ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့သို့ အလုပ်သမားများ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သူ ၇ ဦးအား ရေကြည်မြို့နယ်၊ တရားရုံးက ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရအလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁ လစီ ယနေ့ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ပုလင်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဒေါ်သီတာပါ လူ ၄ ဦးနှင့် နေပြည်တော်တိုင်းမ် မှုခင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့မှ ဇေယျာမင်းထက်ပါ သတင်းထောက် ၃ ဦးတို့မှာ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့အပိုင် မြက်တိုအုပ်စု၊ တောင်ယာတန်းကျေးရွာမှ အလုပ်သမား ၁၃ ဦးကို အလုပ်ပြန်ဝင်ရန် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ကား ၂ စီးဖြင့် လာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက … Read more
စံပါယ်ပန်း စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း
စံပါယ်ပန်း စိုက်ပျိုးနည်း စံပါယ်ပန်းကို မိုးဦးကာလတွင် အပင်ပျိုးထောင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ အပင် မစိုက်ခင်မြေဆွေး နွားချေးဆွေးများကို စိုက်မည့်နေရာတွင်ကျင်းထူး ပြီးထည့်ပေးရမည်။ (အချိုးနှုန်းကတော့ ၁ကျင်းလျှင် ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ဂရမ် နှုန်း) ပြီးလျှင် အပင် ကိုင်းတက် (Sucker) ဒါမှမဟုတ်ရင်အမြစ်ထွက်ပြီး ကိုင်းကူး/ကိုင်ထိုးပင် (layering/ cutting) အပင်တွေကိုစိုက်လို့ရပါပြီ။ ၁ နှစ်သားဆိုရင် ပန်းစပွင့်တာပါဘဲ.. စိုက်တဲ့အချိန်မှာ3ပေ5ပေခြား ပြီးစိုက်ကြပါတယ်.. စံပါယ်ပန်းဟာမိုးဦးကျတွင် စတင်ပွင့်ကြပါသည်။ အချို့ဒေသတွင် စံပါယ်ပန်း စောစော ပွင့်စေရန် ဆောင်းအကုန် ဒီဇင်ဘာလ/ ဇန်နဝါရီလ လောက်မှာ အပင်ပြုပြင်ပေး ရပါတယ်။ ပြုပြင် နည်းတွေကတော့ အရွက်ချွေပေးတာ တို့၊ မြေသြဇာ (နှမ်းဖတ်ပုပ်ရည်) ထည့်ပေးတာ၊ … Read more
နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ။ အဆင့် (၁) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင်သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။ အဆင့် (၂) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်စေ့မှာကပ်ပြီး ခေါင်းကို ရှေ့ဖိနိုင်သလောက် ဖိပါ။ ခါးကုန်းမသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။ အဆင့် (၃) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား ဘယ်ဘက်လက်ကို ခါးထောက်ထားပြီး ညာဘက်လက်က ဦးခေါင်းကို အပေါ်ကနေ ညာဘက်ပါနိုင်သလောက် ဆွဲဖိထားပါ။ ခါးမပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး … Read more
နှစ်ရှည် ထိပ်ကပ်နာအတွက် ဒီနည်းလေးနှင့် စမ်းကြည့်ပါ
ထိပ်ကပ်နာ ဆေးနည်း ကျွန်တော် ထိပ်ကပ်နာ ဖြစ်နေတာ ၅. နှစ်လောက် ရှိနေပါပီ ။ ဘယ်ဆေးနဲ့မှ မသက်သာခဲ့ပါဘူး ဒန့်ဒလွန် အမြစ်ကိုသွေးပီး လည်ပင်းမှာလိမ်းကြည့်ပါ ။ တကယ် သက်သာပါတယ် ။ နှာခေါင်းပွင့်တယ် ချွဲမထတော့ဘူး နေရတာ သက်သာတယ် ။ အအေးမခံပါနဲ့ အခုမှလိမ်းတာ သုံးရက်လောက် ပဲရှိသေးတယ် ။ ထိပ်ကပ်နာဝေဒနါရှင်အားလုံး ပျောက်ကင်းကြပါစေ တကယ်သက်သာတာပါ ။ နဲနဲပူတယ် စပ်လဲစပ်တယ် လိုင်းပေါ်ဆေးနည်းပေးတဲ့သူတွေလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘဝတူတွေသက်သာပါစေ ရှိန်း ဝင့် သူ အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများစုစည်းမှု့ Unicode ထိပျကပျနာ ဆေးနညျး ကြှနျတျော ထိပျကပျနာ ဖွဈနတော ၅. နှဈလောကျ ရှိနပေါပီ ။ ဘယျဆေးနဲ့မှ မသကျသာခဲ့ပါဘူး ဒနျ့ဒလှနျ အမွဈကိုသှေးပီး … Read more